I-Arion Seaside Suites Studio 3 - I-Airbnb
I-Arion Seaside Suites Studio 3
U-Sarah unokuphawula okungu-32 kwezinye izindawo.
U-92% wezivakashi zakamuva unikeze u-Sarah izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Amafulethi kanokusho ahlangene akha i-Boutique Hotel enhle kakhulu enamachibi okubhukuda omphakathi kanye ne-pool bar. Ifakwe ezingeni eliphezulu kakhulu ihlinzeka ngakho konke okudingekayo ukuze uqedele ikhaya ukusuka nokuhlala ekhaya. Akhiwe nje amamitha ambalwa ukusuka ogwini oluthulile lwe-Pogonia lawa mafulethi ayinketho efanelekile yeholide.
Ifulethi lesitudiyo esisezingeni eliphezulu.Ibukeka kahle futhi itholakala kalula eduze kolwandle. Uma ungena kukhona ikhishi elihlanganisa ifriji elincane, usinki, umshini we-espresso, iketela, i-toaster kanye nezitsha.
Igumbi lokugezela linendawo yokugezela yemvula ebanzi kakhulu, i-WC kanye nesitsha. Amashalofu okhuni anikeza indawo yezinto zangasese namathawula.
Indawo yesitudiyo esikhulu inombhede wenkosi onethezeke ngokwedlulele we-Coco-mat enamatafula aseceleni kombhede nezibani zokufunda ezithambile. Kunikezwe insada yendawo yokugcina, kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba kanye ne-WiFi.
Isitudiyo sinovulandi waso wangasese onezihlalo netafula futhi sivikelwe yi-bamboo pergola.
Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela endaweni yokubhukuda yomphakathi ngaso sonke isikhathi futhi zinga-oda ukudla okulula neziphuzo endaweni yokubhukuda.
ubusuku obungu-7 e- Pogonia
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-32 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
IPogonia, idolobhana elihle elisogwini olusentshonalanga yezwekazi laseGreece, lisendaweni engemuva emangalisa yezindawo ezinhle nezizolile kanye namanzi acwebile olwandle lwase-Ionian. Izihlahla zomnqumo, izivini kanye nezihlahla zikaphayini zifinyelela emabhishi anesihlabathi. Ama-tavernas wendawo, ikhefi kanye nebhikawozi kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Edolobheni lasePaleros eliqhele ngamakhilomitha amane ukusuka esitudiyo kunezitolo ezinkulu, ama-ATM asebhange, imoto, ukuqashwa kwamabhayisikili nezikebhe, ama-taverna amaningana, ikhefi, amabha kanye nokuphila kwasebusuku nje jikelele.
Kukhona futhi indawo yokudlela yesimanje yasebhishi, i-Yacht Club Paleros, http://pyc.gr/ ene-teak sunbeds, ama-pizza kahhavini wezinkuni nokudla kwasendaweni okuhle kakhulu, ama-cocktails amahle, u-ayisikhilimu ovela obisini olusha futhi ngokuvamile amakhasimende ethu achitha lapho isikhathi esiningi.
Itholakala endaweni ekahle okwenza ilungele uhambo olufushane oluya esiqhingini esiseduze sase-Lefkada, esihlukaniswe nezwekazi ngebhuloho elintantayo elingamam nje angama-50 ubude. I-Preveza, iParga nezinye izindawo eziningi nazo zingafinyelelwa kalula ngemoto enikeza izindawo ezinhle zohambo lwansuku zonke.
Kunohambo losuku oluyimfihlo olumnandi olunesikebhe esinezimbambo ezizungeze iziqhingi http://ionianescape.com/, kokubili esikuncoma kakhulu. Lokhu kungabhukwa nathi.
Sihlezi singemuva nganoma yini oyoyidinga.